ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍
Posted by chityimhtoo on Jun 10, 2012 in News | 10 comments
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ လွန်ကဲသောရေးသားဖော်ပြချက်များကိုတွေ့လာရသဖြင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုကိုပျက်ပြားစေသည့် ရေးသားဖော်ပြမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါကတည်ဆဲ ဥပဒေများအရ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေကပြောသည်။
အရေးအကြီးဆုံးမှာ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးပင်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းတွေ့ဆုံပွဲသို့ စာပေစိစစ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ဌာန ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးတင့်ဆွေနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးမြင့်မောင်တို့ပါတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ စာပေစိစစ်ရေးသို့တင်ပြပြီး၊ စာပေစိစစ်၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းသာ ဖော်ပြကြရန်ကိုလည်း မီဒီယာများအားပြောကြားခဲ့သည်။
တဲ့ပုံအောက်မှာ လုံထိန်းတွေပုံနဲ့ပြတော့ မီးကိုလုံထိန်းတွေကရှိူ့သလိုဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးကုလားတွေ
ကလည်းအကွက်ကျလွန်းတယ် ကိုယ့်အိမ်ကို ကိုယ်မီးနဲ့ရှိူ့ပြီးထွက်ပြေးတာ ကမ္ဘာ့မီဒီယာအမြင်မှာကုလား
ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ စာပေစိစစ်ရေးသို့တင်ပြပြီး၊ စာပေစိစစ်၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းသာ ဖော်ပြကြရန်ကိုလည်း မီဒီယာများအားပြောကြားခဲ့သည်။
သတင်းကို စာပေစီစစ်ရေးသာတင်ရလို့ကတော့ အချိန်နဲ့တပြေးညီ ဘယ်လိုလုပ် သိနိုင်တော့မှာလဲ။
ဟုတ်ပါတယ် အမှန်ကိုသိနိုင်ဖိုက ကခဲယဉ်းသွားပါပြီ
ဥပမာ မိုးပေါ်ထောင်ပစ်တယ် ဆိုတာတို့ ဘာတို့
စစ်သားက အခန်းအနားကလွဲလို့ ဘယ်တော့မှ မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဖူးဗျ
လူကြီးကတော့ လူကြီးစကားပဲပြောပါမည်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုး ထိခိုက်နစ်နာနေမှုမှန်သမျှ ဖော်ထုတ်ပေးကြပါ ဂျာနယ်လစ်အပေါင်း ခင်ဗျား။ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ကိုယ်လမ်းကိုယ် ဆက်လျှောက်ရုံသာရှိပါသည်။
If Media can not describe truly/ openly , our country can not solve the any problem liked the Rohinjar ( Bengali ) problem and go to dark deeply. If it happen more big problem, the media blocker may be No.1 culprit.
အခု မြန်မာပြည်မှာ ရေပန်းအစားဆုံး သတင်းကတော့ ဒီရခိုင်သတင်းပါပဲ။ အပြင် ဂျာနယ်တွေမှာရော၊ အင်တာနက် တစ်ခွင်မှာပါ ဒီသတင်းက ထိပ်ဆုံးက ရောက်နေတာပါ။ ဂျာနယ်တွေမှာ လွန်လွန်ကဲကဲ ရေးထားတာတွေကို စာပေစိစစ်ရေးနဲ့ တားဆီးလို့ ရနိုင်ပေမယ့် အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတော့ တားဆီးဖို့ ခက်ပါသေးတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်က လွန်လွန်ကဲကဲ ရေးထားတဲ့ သတင်းတွေကိုပါ တားဆီးနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပါ။
တို့ကတော့ တို့ကတော့ အရေးကြီးလို့ ခေါ်ပြောတယ်လို့ ထင်ပါသည်။
ဆူပူမှု ကိုအားပေးစေသော သတင်းများ
နိုင်ငံတော်အတွက် ကမ္ဘာ့အလည် မှာဒုက္ခ ရောက်နိုင်စေတဲ့ သတင်းများ
အပ်နဲ့ထွင်းရမှာကို ပုဆိန်နဲ့ထွင်းရအောင် ဖြစ်စေတဲ့ သတင်းများ
မပါဝင်စေလို လို့ပါ ဂျာနယ်များ သည်းခံပေး စေလိုပါသည် ခင်ဗျား…….